जिम्बा भन्छन्- क्याबले गोर्खालाई छुँदैन : दुबे भन्छन्- मणिकुमार सुब्बा विदेशी हुन् : राजु विष्ट मौन - खबरम्यागजिन
Homeखबरजिम्बा भन्छन्- क्याबले गोर्खालाई छुँदैन : दुबे भन्छन्- मणिकुमार सुब्बा विदेशी हुन् : राजु विष्ट मौन
जिम्बा भन्छन्- क्याबले गोर्खालाई छुँदैन : दुबे भन्छन्- मणिकुमार सुब्बा विदेशी हुन् : राजु विष्ट मौन
December 13, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि खबर 0
जिम्बाले गोर्खाहरूलाई क्याबले नछुने भन्दै गर्दा उता दुबेले मणिकुमार सुब्बाको नाम नै लिएर विदेशी बताउनुले भने भाजपाको आन्तरिक एजेण्डा के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। गोर्खालाई क्याबले नछुने हो भने मणिकुमार सुब्बालाई किन विदेशी भनिँदैछ? यो निक्कै गम्भीर बहसको कुरा बनेको छ।
कालेबुङ, 13 दिसम्बर
क्याब पारित भइसकेको छ। भाजपा एनआरसी लागू गर्ने योजनामा छ। उतरपूर्वी राज्य, बङ्गाल र केरलामा क्याब विरुद्ध प्रदर्शन चलिरहेको छ। यता क्याब र एनआरसी लागू नभइ भाजपाले भारतीय गोर्खालाई अनुप्रवेशकारी सावित गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको छ। हिजो मात्र भारतीय जनता पार्टीका सांसद निशिकान्त दुबेले असमका पूर्व गोर्खा सांसद स्व. मणिकुमार सुब्बामाथि विदेशीको गम्भीर लाञ्छना लगाएका छन्।
भर्खरै गृहमन्त्री अमित शाहले गोर्खाहरूलाई अनुप्रवेशकारी भनेको सन्दर्भमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भयो। दार्जीलिङमा त अमित शाहलगायतका पुतलासमेत दहन गरियो। क्याबको खेस्रा जलाउने प्रक्रिया अझ जारी छ। यस्तोमा दुबेले मणिकुमार सुब्बालाई विदेशीको लाञ्छना मात्र लगाएनन् उत्तरपूर्वीय क्षेत्रमा व्यापक घुसपैठ छिराएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
‘एम.के. सुब्बा नेपालका नागरिक कङ्ग्रेसका सांसद थिए।उनले केवल घुसपैठ बढाउने काम गरे। उनले बङ्गालदेशदेखि लिएर बाहिरका मानिसहरूलाई नर्थइस्टमा ल्याउने काम गरे’, भाजपा सांसद निशिकान्त दुबेले संसदमा भने। यता दुबेले सुब्बामाथि लगाएको आरोपबारे दार्जीलिङका सांसद राजु विष्ट त मौन छन् नै भाजपा समर्थक गोजमुमो-1, क्रामाकपा, गोर्खालिगलगायतका दलहरू पनि मौन देखियो।
केही वर्ष अघि सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङलाईसमेत विदेशीको लाञ्छना लगाइएको थियो। यता विमल गुरुङहरूको नाम भोटर लिस्टबाटै काटिएको छ। भर्खरै पनि गृहमन्त्री अमित शाहले गोर्खाहरूलाई अनुप्रवेशकारी बताउने आशयको टिप्पणी गरेको भन्दै असमका सांसद तरुण गगोईले संसदमा नै विरोध गरेका थिए। सोसल मिडियामा दुबेको आरोपको व्यापक विरोध भइरहेको छ। यता भाजपाका विधायक निरज जिम्बाले भने नागरिक संशोधन विधेयकले गोर्खालाई छुँदै नछुने बताएका छन्।
गोर्खा समुदाय क्याबसित अलिकति पनि डराउनु नपर्ने जिम्बाको ठोकुवा छ। उल्टै जिम्बाले विनय तामाङहरूले तृणमूल कङ्ग्रेसँग लागेर सीएबी र एनआरसीबारे जनतामा भ्रम फैलाइरहेको आरोप कसेका छन्। जिम्बाअनुसार सीएबी गोर्खा समुदायका लागि होइन। नागरिकता संशोधन विधेयक केवल तीन देश पाकिस्तान, बङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट प्रताड़ित बनेर आएका हिन्दुलगायत अन्य केही सम्प्रदायका लागि हो।
‘यसले भारतीय गोर्खालाई छुँदै छुँदैन। हामी यसबाट प्रभावित हुँदैनौं। एनआरसीबाट पनि गोर्खा प्रभावित नबनिने गृहमन्त्री अमित शाहले भनिसकेका छन्,’ जिम्बाको भनाई छ। र उनले भनेकै कुरा भने बीलमा कहीँ कतै उल्लेख छैन। शाहले बीलमा एउटा कुरा मुखमा अर्को कुरा गरिरहेकोले पनि व्यापक सन्देह फैलिएको हो। यता भारतीय जनता पार्टी दार्जीलिङ जिल्ला अध्यक्ष मनोज देवानले त नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी)-को विरोध गर्नेहरूलाई देशविरोधीको संज्ञा समेत दिएका छन्।
‘देशको हितमा रहेको बिललाई आज यहाँका केही क्षेत्रीय दल र तृणमूल सरकारले विरोध गरिरहेका छन्। संसदमा नागरिकता संशोधन बिल पास हुँदा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले विरोध जनाउँदैछन्। आज त्यै भाषामा यहाँका क्षेत्रीय दलका नेताहरूले विरोध जनाउँदैछन्। उनीहरू देशविरोधी तत्त्वहरू हुन्। हामी उनीहरू देशविरोधी तत्त्व भन्छौं,’ देवानले भनेका छन्।
दलगाउँमा आधार कार्डको नाममा लुट: एकजनाबाट लिइँदैछ6सय रुपियाँ
जल्यो क्याबको खेस्रा : ‘राजु विष्टले संसदमा हामीले उठाइरहेको मागलाई नै उठान गरे’
झाऱ्यो सेनाः सीआरपीको छापामारी जारीः सिंहमारीमा फाइरिङ-फेरि एकको मृत्युः जम्मा तीनको मृत्यु (39,310)
दार्जीलिङमा फेरि भड्कियो हिंसाः गोलीबारीमा एक पुलिस अधिकारीको मृत्युःजारी छ गोलीबारी (34,844)
पिसाबमा रगत बग्न थाल्यो, तरै पनि अनशनकारीहरू भन्छन्, दबाई होइन गोर्खाल्याण्ड चाहिन्छ (21,874)
बनियो राष्ट्रीय गोर्खाल्याण्ड समितिः अबको आन्दोलन बौद्धिक नेतृत्वले गर्नेछ-मुनिष तामाङ (19,772)